Q2 2076/77(Q2 2076/77) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सहारा विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपातमा आक्रामक सुधार, नाफा २५.९२%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । सहारा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २५.९२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो । गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा...
१० सूचकमा विकास बैंक: मुक्तिनाथ सबैभन्दा अगाडि, महालक्ष्मी, गरिमा र ज्योतिको ग्रोथ लोभलाग्दो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमध्येबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले धेरै सूचकमा आफूलाई पहिलो नम्बरमा उभ्याउँदै उत्कृष्ट बनेको छ । बिजशालाले विकास बैंकहरुले प्रकाशन गरेको दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणका आधारमा १० वटा मुख्य सूचकलाई लिएर गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा ५ वटा सूचकमा मुक्तिनाथ...
यी हुन् दोस्रो त्रैमासमा बढी नाफा कमाउने १० वाणिज्य बैंकहरु, अरुले कति कमाए ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास धेरै नाफा कमाउने ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको सूचीमा यसपालि पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्र स्थानमा देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि वाणिज्य बैंकले बाँकी २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई पछि पार्दै यसपालि पनि अग्रस्थान कायम गर्न सफल भएको हो । यो बैंकले समीक्षा अवधिसम्ममा २ अर्ब २०...
अधिकांश सूचकमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको छलाङ, नाफामा १३९.९२%को उछाल
काठमाण्डौ। जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले गत वर्षको तुलनामा १३९.९२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउन सफल भएको हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा ८५ लाख ७२ हजार रुपैयाँमात्र थियो...
नेसनल लाइफ: बिमा शुल्कमा ३०.२७%को छलाङ, जीवन बिमा कोषमा ३० अर्ब माथि
काठमाण्डौ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्ममा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३०.२७ प्रतिशतले खुद बिमा शुल्क आर्जन बढाउन सफल भएको हो। अघिल्लो वर्षको यही तुलनामा कम्पनीले २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमात्र खुद...
एलआईसीको खुद बिमा शुल्क साढे ७ अर्ब माथि, जीवन बिमा कोषमा २५.४८%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३२.४१ प्रतिशतले खुद बिमा शुल्क आर्जन बढाउन सफल भएको हो। अघिल्लो वर्षको यही तुलनामा कम्पनीले ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र खुद...
काठमाण्डौ । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार गरेको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले खराब कर्जा अनुपात ७.०२ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म २१.७० प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात रहेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर १४.६८ प्रतिशतमा झरेको...
कुमारी बैंकमा गाभिन लागेको देवः विकास बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढ्यो, नाफा घट्यो
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमिटेडमा विलय हुन लागेको देवः विकास बैंक लिमिटेडको खराब कर्जा अनुपात चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म झनै बढेको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खराब कर्जा अनुपात गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १.०६ प्रतिशतले बढेर २.९८ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर गत वर्ष यही अवधिसम्म १.९२ प्रतिशतमात्र थ...
एनएमबी बैंकमा गाभिन लागेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको यस्तो छ वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकमा गाभिने सम्झौता गरेको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा सुधार गरेको छ । दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १३.६५ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। यो अवधिसम्ममा बैंकले ४ करोड १० लाख...
ज्योति विकास बैंकद्वारा अधिकांश सूचकमा आकर्षक प्रगति, नाफामा ६४.७६%को छलाङ
काठमाण्डौ । ज्योति विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा आकर्षक प्रगति गरेको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६४.७६ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। यो अवधिसम्ममा बैंकले २८ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही...
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको नाफा २५.४९%ले बढ्यो, ईपीएस रु. १५.४५
काठमाण्डौ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा २५.४९ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। यो अवधिसम्ममा बैंकले ६५ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद...
दोश्रो त्रैमासमा पनि राबा बैंकलाई कसैले टप्न सकेन, नाफासहितका सूचकमा सबैभन्दा अगाडि
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमीटेड चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा पनि सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्न सफल भएको छ। यो सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई टप्दै विगतमा झै नाफामा पुनः आफ्नो टप स्थान सुरक्षित गर्ने सफलता पाएको हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्ममा २ अर्ब २० करोड नाफा...
मेगा बैंकको नाफामा ३०% को बढोत्तरी, निक्षेप र कर्जातर्फको वृद्धि पनि सन्तोषजनक
काठमाण्डौ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको खुद मुनाफा ह्वात्तै बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म मेगा बैंकले ९५ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा ४३ करोड ७४ लाख मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ९५ करोड २ लाख खुद मुनाफा गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक...
शिवम सिमेन्टको नाफामा पहिरो, खर्च बढेको बढ्यै
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा लगानीकर्ताको रोजाई बन्दै आएको शिवम शिवम सिमेन्टको खूद नाफामा पहिरो गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खूद नाफामा २९.८७ प्रतिशतको पहिरो गएको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ४६ करोड १२ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष...
सेन्ट्रल फाइनान्सको नाफा २०.३३%ले बढ्यो, पीई रेसियो १३.९१
काठमाण्डौ । सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश सूचकमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २०.३३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ३ करोड ७५ लाख...
कोरोनाबाट चिन्तित जर्मनका वित्तमन्त्रीले गरे आत्महत्या
नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्यायो बैंक र ऋणिका लागि १९ बुँदे बम्पर प्याकेज
लाशै लाशको सहर भइसक्यो, तर हतास छैनन् इटलीका स्वास्थ्यकर्मी